ओली सरकारले गर्‍यो पहिलो ‘पावरफुल’ निर्णय, क–कसको छुट्यो पसिना ? – Online National Network
२९ चैत्र २०७४, बिहीबार ०२:४७
काठमाडौं, २९ चैत – सरकारले यातायात सेवा समितिहरू खारेज गर्ने तयारी थालेको छ । संघसंस्था ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका सेवा समितिहरू यातायातमा एकाधिकार (सिन्डिकेट) लाद्न सक्रिय रहेको निष्कर्षसहित सरकारले खारेज गर्न खोजेको हो ।
नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ भने सरकारी कदमको विपक्षमा छ । महासंघ अध्यक्ष योगेन्द्र कर्मचार्यले विनातयारी सरकार समिति खारेज गर्न लागेको बताए । उनले भने, ‘सरकार सेवा समिति खरेजीमा लागेको सुन्नमा आएको छ । सरकारले यो काम विनातयारी गर्दै छ । मुलुकभर ३ सय ५ सेवा समिति छन् । त्यससँग करिब २ लाख बस छन् । समिति खरेजीपछि उनीहरू कहाँ जाने ? कम्पनीमा दर्ता गर्न पनि समय त चाहियो नि ? यसको खाका के हो ? यी सबै पक्षको टुंगो नलगाई खरेजीको काम भइरहेको छ । हामी विरोधमा छौँ ।’ – नयाँ पत्रिका दैनिक